Jawaabta fal-dambiyeedyada kiisaska coronavirus, ardayda iskuulada dadweynaha ee Magaalada Sioux wax | KWIT
Somali News 12.15.2020
Jawaabta fal-dambiyeedyada kiisaska coronavirus, ardayda iskuulada dadweynaha ee Magaalada Sioux waxay dib ugu laaban doonaan dugsiga 4-ta Janaayo qorsho isku dhafan oo barasho. Kulankii xalay guddiga dugsiga ayaa isku raacay nooc waxbarasho oo isku dhafan oo la qaban doono labada toddobaad ee ugu horreeya bisha Janaayo, marka fasaxa fasaxu dhammaado. Taas macnaheedu waa labada toddobaad ee ugu horreeya iyo labadii usbuuc ee ugu dambeeyay ee simistarku waxay noqon doonaan kuwo isku dhafan. Qiyaastii nus ardayda waxay tagi doonaan iskuulka shaqsi ahaan Isniinta iyo Khamiista, qeybta kalena Talaado iyo Jimce.
Waaxda Caafimaadka Bulshada ee Iowa ayaa diiwaangelisay 67 dhimasho dheeraad ah sababo la xiriira dhibaatooyinka COVID-19 iyo in ka badan 1,300 xaaladood 24-saac gudahood.
Caafimaadka Degmada Siouxland wuxuu ku daray 41 xaaladood oo dheeri ah Gobolka Woodbury in kabadan 11,500. Waxaa jiray 145 dhimasho intii lagu jiray aafada.
Degmada Dakota waxay soo tabisay kaliya 7 kiis oo kale iyo 52 dhimasho ah. Heerka waxtarka tijaabada ayaa hoos ugu dhacay boqolkiiba lix.
Heerka waxtarka ee 14-maalmood ee tijaabada ah ee Degmada Woodbury ayaa hoos udhacay boqolkiiba-boqol ilaa 16.8%. Wax kasta oo ka sarreeya 5% macnaheedu waa heerar sare oo faafidda bulshada ee fayraska.
Saraakiisha maxalliga ah waxay ku biireen xooggooda si ay u sii daayaan Ogeysiiska Adeegga Dadweynaha si loo muujiyo muhiimada ay leedahay xirashada weji-gashiga iyo tallaabooyinka kale ee nabadgelyada.
PSA waxaa kujira Duqa Magaalada Sioux Bob Scott iyo hogaamiyaasha caafimaadka ee ka kala socda Degmooyinka Woodbury iyo Dakota.
Waxay ku dhiirrigelinayaan qof walba inuu la wadaago fiidiyowga gaaban akoonkiisa gaarka ah iyo ganacsiga bulshada.
Maamulka Kim Kim Reynolds ayaa adeegsanaya 10 milyan oo doolar oo ah lacagaha gargaarka degdegga ah ee federaalka si loogu bixiyo mushaaraadka saraakiisha booliska gobolka, kuwaas oo inta badan aan si toos ah ugu lug laheyn jawaab celinta virus-ka Iowa.
Dhanka kale, gudoomiyuhu wuxuu sheegay in gobolku uu soo celinayo $ 21 milyan oo doolar oo ka mid ah lacagta coronavirus-ka ee dawlada dhexe ay qorshaysay inay ku bixiso kor u qaadista nidaamka tikniyoolajiyadda macluumaadka ee gobolka.